जीवन र मृत्युबिचको दूरि | Hamro Patro
लिएर जाने कुरा केहि छैन शिवाय तिता मिठा अनुभव र यादहरु... शायद! जीवन र मृत्युको अन्तर कुनै मिलिसेकेण्ड या मिनेटभरमा हुन्छ र एक मिलिसेकेण्ड अगाडि एउटा उर्जावान गतिशिल जीवन क्षणभरमैं मृत हुन्छ, तर कसरी ? हरेकले बेग्ला बेग्दै तर्क गर्लान् तर, यो प्रश्न ना जवाफ छ ।
हरेक जीवनको शुरुवातसंगै एउटा कटूयर्थात् पनि संगै हुन्छ त्यो हो, मृत्यु एउटा शाश्वत सत्य ! अवधि छोटो या लामो होला तर अन्त्य निश्चित छ । तथापि यो तितो यर्थाथलाई भुलेर जीवन र मृत्युबिचको अवधिलाई आ-आफ्नो ढंगबाट जिउने प्रयास सबैको हुन्छ । कुनै उपभोग्य वस्तुको खोल अगाडि लेखे झै हामी प्राणिहरुको जीवनमा एक्सपायरी डेट त पक्कै पनि हुँदैन र शायद! यहि सस्पेन्सले जीवन जिउने कला र जीवनको महत्व बढाइदिन्छ ।
पृथ्वीका ति तमाम स्वाँस चाहिने जीवनको मृत्यु सामान्य अर्थात् बुढेसकाल लागेपछि हुन्छ तर सबैजना यस्ता भाग्यमानि हुँदैनन । मृत्युका धेरै कारण र रुपहरु छन जसलाई निराशावादी रुपमा केलाइरहन आवश्यक छैन तर यस्ता थुप्रै क्रियाकलापहरु छन जसले हरेक क्षण हामीलाई मृत्युसंग धेरै नजिक बनाइरहेको हुन्छ तथापि हामी ति कारणहरुबाट बेखबर छौं । यस्ता फरक फरक केही मृत्यूका कारणहरुलाई वेवास्ता गर्न केहि हदसम्म सकिएला तर कतिपय त्यस्ता फरक घटना र क्षणहरू हुनसक्छन् जुन नियन्त्रणको परिधी भन्दा धेरै बाहिर हुन्छ, असोंचनीय अनि अकल्पनिय !
जन्मेदेखि नै प्रगती र प्राप्तिकालागि दौडधूपको संसारमा होमिनु मान्छेको नियति हो । धनसम्पतिको मोह पनि उत्तिकै हुन्छ, तिनै सम्पतिको क्षय हुने डरले हरपल सक्रिय चिन्तायूक्त जीवन जिउनेहरू आफ्नो जीवन नाशवान छ भन्नेकुरासंग जानकार हुँदैन या भएर पनि अञ्जान छ । लिएर जाने कुरा केहि छैन शिवाय तिता मिठा अनुभव र यादहरु... शायद! जीवन र मृत्युको अन्तर कुनै मिलिसेकेण्ड या मिनेटभरमा हुन्छ र एक मिलिसेकेण्ड अगाडि एउटा उर्जावान गतिशिल जीवन क्षणभरमैं मृत हुन्छ, तर कसरी ? हरेकले बेग्ला बेग्दै तर्क गर्लान् तर, यो प्रश्न ना जवाफ छ ।
लडाइमा सक्रिय सैनिक, प्लेनमा सवार यात्रु लगायत जो कोही मृत्यूको त्यो मिलिसेकेण्डको प्रभावबाट अछुतो छैन, चाहे ढिलो या चाँडो मृत्यु अवश्यम्भावी छ र यो सत्य छ ।
धेरैले मृत्यूलाई नजिकबाट महसुस गरेका हुन्छौ नै, गत वर्षको भूँइचालोले पनि एकाएक एउटा विर्षिनै नसक्ने ठूलो मानव विनासको झलक देखाएर गयो । धेरै पटक हामी झण्डै मरेको, बल्ल बल्ल बाँचेको, अवचाँही मरे, मृत्यूको मुखबाट आँए जस्ता अनुभवहरु देखेका र भोगेका छौं । जीवन र मृत्यु धेरै नजिक छ तसर्थ मृत्युलार्इ आत्मसाथ नगरेर जीवनको यथार्त नै अर्धसत्य हुन्छ । जन्म र मृत्युबिचको भागनै जीवन हो र मृत्युसंग डराउने भन्दा पनि बाँचुञ्जेलको सत्यतालाई कायम राखि जीवनमा खुशीयाली भरेर भब्य र सौहार्दयूक्त सकारात्मक जीवन बाँच्न सकौं, सबैलाई दर्शन् ।